Sida loo yeesho xidhiidh caafimaad qaba - Sida loo noqdo lamaanaha ugu habboon | Niman qurux badan
Lammaanayaal badan ayaa dib uga fakaraya xaqiiqada ogaanshaha haddii ay ilaalinayaan xiriir caafimaad qaba. Marka lagu jiro dammaanad saameyn leh, waxaa laga yaabaa inaanan ogaanin haddii wax walba ay ku bilaabanayaan lugta midig, xiriir kastaa wuxuu leeyahay calaamadihiisa ugu horreeya. waxaad arki kartaa casaan taasina waxay kaa shakin kartaa sida xidhiidhka hore loo qiimaynayo.
Dhanka kale, nooca xiriirka muddada dheer waa la arkay, oo leh sanado badan oo xiriir ah. Isku xirka labada iyo lifaaqa kuma ogolaanayso inaad aragto inaad dhab ahaantii ilaalinayso xidhiidh caafimaad qaba. Waxaad arki kartaa in ay jiraan wax qaldan iyo shaki in waxa aad haysato ay ku socon karaan waddo wanaagsan iyo in kale. Marka hore waa inaad falanqeysaa faahfaahinta si aad awood ugu yeelatid inaad sameyso qiimaynta xidhiidhkaaga.
1 Waa sidee xiriirka caafimaadka qaba?
2 Astaamaha lagu ilaaliyo xidhiidhka caafimaadka qaba
Waa sidee xiriirka caafimaadka qaba?
Xidhiidh fiican oo aan lahayn kor iyo hoos waa in lagu abaalmariyo taxanayaal tayo leh in aynaan inta badan qadarin ama iska indho tirin. Waa lama huraan lasoco lambarkan faah faahinta si aanu xidhiidhka wakhtigu u xumaan.
Ixtiraamku waa tayada koowaad. Qofku waa inuu ixtiraamaa habkaada iyo shakhsiyaddaada oo dhan, waa inay si dhab ah kuugu jecel yihiin sida iyo qofka aad tahay.
Xidhiidhka wanaagsani wuxuu abaalmariyaa xidhiidhka. Ha qarin dareenka, dareenka iyo welwelka ka dhalan kara lammaane ahaan. Waa in aad taqaan sida loo hadlo oo aad naftaada u ogolaato in aad maqasho.
Run ahaantii waa tayo si kalsooni leh ula socota. Haddii qarsoodigu bilaabo inuu jiro, haddii xogta la qariyo ama been la qabto, malaha tani ha bilaabin inaad kalsoonida siiso xiriir wanaagsan. Xaqiiqda beenta noocaan ah waxay keeni kartaa hinaaso lama filaan ah ama taas kalsooni ma jirto.
Sii oo qaado Waa hab aad ku muujiso jacaylkaaga oo dhan. Marka labada qof midkood uu ku jiro waqti xun, mid ka mid ah labada Waxaan sameynayaa dadaalkaas weyn si loo ilaaliyo gariirka sare. Taageeradu waa lama huraan, Mar walba waxaa jira iyo xiiso dhiirigelinaya in aad dhegeysato oo aad garabkaaga siiso.
Astaamaha lagu ilaaliyo xidhiidhka caafimaadka qaba
Isgaadhsiinta had iyo jeer waa halku-dhigga ugu weyn xiriir kasta, qoyska iyo jacaylka labadaba. The ixtiraam iyo daacadnimo. Macluumaadkani waa muhiim, maadaama isgaarsiintu isu beddeli karto dood, mana fiicna in marar badan la yimaado ereygan. Wadahadladu waa in ay noqdaan kuwo is-gaarsiineed, ujeedaduna tahay in la dhiso oo aan laga tagin sidii ay wax ahaayeen. Aragtida waxaas oo dhan waa ku darso hadhuudhkeena si xiriirku u noqdo mid wax dhisa, iyada oo aan loo baahnayn in la galo kaalin wax duminaysa oo sun ah.
Si loo helo xiriir wanaagsan mar walba waa inaad wax ka sheeg xaqiiqo jirta, si xushmad leh oo aan cidna isku dayin. Kartida wax loo sheego waa inay socotaa iyadoo ujeedadu tahay isgaarsiin oo aan qeylin ama hadal xun.
Laba qof awoodaan is jeclaada haddana wax badan oo ay si gaar ah u wadaagaan ma jiraan. Si kastaba ha ahaatee, waxay koreen inay ogaadaan oo muujiyaan waxa ay daneeyaan iyo isku mar Go'aaminta luqadaada si aad ugu hadasho luqad isku mid ah, waa inaad raadisaa taabashada jirka iyo waqti tayo leh u huro.
Waa inaad ixtiraamtaa booska shakhsi ahaaneed. Waxay u egtahay odhaah is burinaysa oo macnaheedu yahay inaad wakhti wada qaadanaysaan, laakiin tayada wakhtiga u dhexeeya lammaanaha ayaa aad u caafimaad qaba. Laba qof oo is jecel ayaa raba inay wada joogaan iyo waqti dheer wada joog. Dhab ahaantii, dadaalka ah in midba midka kale la joogo ayaa faa'iido u yeelan doona mustaqbalka fog. Haddii kale waan ka hadli karnaa ku tiirsanaanta, laakiin iyada oo aan loo marin meel fog, maadaama qof kastaa uu leeyahay booskiisa gaarka ah. Intaa waxaa dheer, waa u caafimaad qof walba inuu haysto wakhtiga firaaqada iyo raadinta shakhsi ahaaneed iyo in lamaanahaagu uu ixtiraamo.
Si aad u daryeesho xiriirka waa inaad Baro inaad la noolaato kala duwanaansho. Haddii jacaylku run ahaantii jiro, waa inaad la noolaataa, adigoon ka dhigin wax xun. Waa in aad is garanaysaan aragtiyaha iyo dhageyso. Haddii ay tahay inaad ka hadasho waad wada hadli kartaa, laakiin adoon aadin meesha ugu sarreysa in la naco ama aan la ixtiraamin.
Inaad noqdaan lamaane faraxsan iyo in ay yeeshaan xiriir caafimaad qaba waa shaqada u qalmidda dhibco badan. Isku soo wada duuboo su'aalahan ayaa lagu cadeyn karaa. Had iyo jeer waxaad samayn kartaa dhammaan yoolalkaas iyo riyooyinkaas si aad u xoojiso xidhiidhka aad rabtay. Had iyo jeer waa in si rasmi ah loo dhigaa xiriir wanaagsan y ku tiirsan mar walba. Labadooda midkoodna waa inuu lahaadaa boos u gaar ah, hadafkiisa iyo riyooyinkiisa, taasina waa inay noqotaa mar walba la ixtiraamo.
Xidhiidhka wanaagsani waxa uu keenaa in laba qof ay is yaqaanaan oo ay rabaan in ay wax badan bartaan. Waa in had iyo jeer abaal-marin u bogid midba midka kale dhibaatooyinkuna waa inay si wadajir ah u hagaajiyaan iyo Labadaba u raadi xal la shaqayn karo. Taageerada iyo fahamku waxay abaal marin doonaan aasaas wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo yeesho xidhiidh caafimaad qaba